PPR Socket ịgbado ọkụ igwe
PPR Socket ịgbado ọkụ Ngwá Ọrụ
Digtel PPR Socket ịgbado ọkụ igwe
Manual Socket ịgbado ọkụ Machine
Ngwa ngwa pụrụ iche
Manual n'isi Fusion Machine
Pee Isi Fusion Machine
Arched Mkpa cutter
CNC Automatic n'isi ịgbado ọkụ Machine
Full-Automatic Dabara Adaba ịgbado ọkụ Machine
Full-Automatic sadulu Fusion Machine
Hydraulic n'isi Fusion Machine
Multi-n'akuku Cutting Machine
Ndụmọdụ maka ịgbado ọkụ THERMOPLASTICS
Eldgbado ọkụ bụ usoro ijikọ elu site na iji nwayọ nwayọ. Mgbe ịgbado ọkụ thermoplastics, otu n’ime ihe ndị bụ isi bụ ihe n’onwe ya. N'ihi na dị ka ogologo dị ka ịgbado ọkụ plastic anọwo na ọtụtụ ndị ka na-aghọtaghị ihe ndị bụ isi, nke bụ oké egwu a kwesịrị ekwesị Weld. Nọmba dị na ...
Pipe anwụrụ kwesịrị ekwesị maka ngwa ngwa mmiri?
Ndị ahịa anyị ejirila usoro pipeline polyethylene mee ihe maka ị drinkingụ mmiri ọ sinceụ sinceụ kemgbe mmalite ha na 1950s. Industrylọ ọrụ plastik ewerewo ọrụ dị ukwuu n'ịhụ na ngwaahịa ndị e ji mee ihe adịghị emetụta àgwà mmiri n'ụzọ dị njọ. The nso nke ule e mere na Pee ọkpọkọ n ...
Àgwà ndị na-eme ka ọkpọkọ HDPE dị mma maka ngwọta mmiri
HDPE ọkpọkọ nwere ọtụtụ àgwà na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe nchoputa maka ibugharị mmiri. Site kpọmkwem olili, ka ileghara-lining nke ẹdude pipeline ka kwụ ntụziaka mkpọpu ala, HDPE anwụrụ si nkwonkwo ike na ogologo oge ductility-eme ka ọ ọma ruru eru maka ọtụtụ echichi te ...
Adress: Mba 288 Huisheng okporo ụzọ, Fenghua, Ningbo
Eldgbado ọkụ bụ usoro nke ịmekọrịta surfac ...
Ọ Pee anwụrụ kwesịrị ekwesị maka obere mmiri ngwa ...
Polyethylene pipeline usoro ndidi ị ...